RockPlayer2 biara na njiri mara njiri mara ya na nhọrọ ịkesa WiFi multimedia ma lelee vidio dị ndụ n'ịntanetị | Akụkọ akụrụngwa
Ọ dịtụwo anya kemgbe Onyeka Onwenu2 e mere ka ndị ọrụ iOS nweta ya, ma ugbu a bụ oge maka ndị gam akporo gam akporo iji nwee ọ enjoyụ ọhụụ ọhụụ nke otu ọkpụkpọ mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị mma na ngwanrọ ngwanrọ maka smartphones na mbadamba. RockPlayer2 ka kụrụ ebe a na-egwu egwu were were rụzigharịrị njirimara ya yana ọtụtụ njirimara dị ike, gụnyere usoro mgbasa ozi ụwa niile, mgbasa ozi mgbasa ozi na-enweghị eriri gafee ngwaọrụ site na RockShare, ụlọ nchọta reimagined (nke a makwaara dị ka FreeSeek), onye ahịa UPnP nke ọma, mgbasa ozi ka mma njikwa faili, sobtaitel nkwado, HDMI oyiri, n'ụzọ zuru ezu customizable akara mmanya, na dị iche iche ogbugbu ịchịkwa multimedia playback na ngwaọrụ na di ntakiri mgbalị. Ihe niile, nke a bụ mmelite dị ukwuu na-echebara mgbanwe ndị dị mkpa gbasara usoro nke njikwa ọrụ dịwanye mma, yana atụmatụ ọhụrụ.
Ugbu a, i nwere ike inwe a sleek ọrụ interface na swipe n'akụkụ ogbugbu nkwado na-enyere gị aka ngwa ngwa ịnyagharịa dị iche iche ọrụ nke ngwa. N'ikwu okwu banyere atụmatụ, nke a bụ ngwugwu RockPlayer2:
TV : Na-enye gị ohere igwu egwu site na isi iyi ntanetị n'ịntanetị. Usoro nkwado akwadoro gụnyere HTTP, SSH, na RTSP, wdg.
Foro - Na-enye gị ohere ịmekọrịta mmekọrịta n’ thentanet maka echiche RockPlayer, mmelite, ajụjụ na azịza, nsogbu na azịza ha. wdg
Ọba akwụkwọ Media : Isi ngwa nke ihe nchọgharị mgbasa ozi na interface njikwa listi ọkpụkpọ kewara ụzọ atọ - Video, Music na TV - nke ọ bụla nwere nkwado thumbnail.
Njikwa faili : ewu faịlụ nchọgharị na-enyere gị aka ngwa ngwa mbubata gị mgbasa ozi faịlụ site kpọmkwem ọnọdụ na SD kaadị.
playlist : Bido ndeputa ndeghari RockPlayer gi nile.
Red : Nsuso ihe niile UPnP ngwaọrụ dị na netwọk ụlọ gị iji kwe ka nnyefe ọdịnaya dịpụrụ adịpụ gafee ngwaọrụ.
Iji kesaa faịlụ ndị ọzọ na ndị ọrụ RockPlayer2 ndị ọzọ dị nso, ị ga-ebu ụzọ pịa bọtịnụ pensụl dị n'aka ekpe aka ekpe iji tinye ọnọdụ nhọrọ. Wee họrọ faịlụ ndị dị mkpa, pịa na Wi-Fi taabụ, họrọ nnata (s) ma ị ga-aga. Na ihuenyo nhọrọ n'onwe ya, ị nwekwara ike ịmepụta listi ọkpụkpọ ọhụrụ, melite ọdịnaya ngwa, hichapụ faịlụ ndị ahọrọ, ma zoo ọdịnaya nkeonwe site na anya anya. Ozugbo ị họrọ faịlụ ndị dị mkpa, ị nwere ike ikwanye ngwaọrụ iji zoo ha na ndepụta ahụ.
Mgbe ị na-ekiri vidio ma ọ bụ na-ege egwu, mmegharị ahụ na-esonụ dị maka ijikwa egwu na ntọala ndị ọzọ:
Jiri mkpịsị aka gị abụọ pịa igwu egwu, kwusi ma ọ bụ malitegharịa n'ụdị.
Swipe aka ekpe ma ọ bụ aka nri iji laa azụ ma ọ bụ gaa ihu, karị.
Swipe elu iji gosi ma ọ bụ zoo njikwa mgbasa ozi.
Metụ ihu aka ekpe nke ihuenyo iji gosipụta mmịfe ọkwa nchapụta.
Metụ aka nri nke ihuenyo iji gosipụta mmịfe olu.
Iji hazie ogwe njikwa, pịa ma jide bọtịnụ ọ bụla na ogwe njikwa. I nwere ihe ruru ogwe osisi ise dị iche iche iji gwuo egwu, na nke ọ bụla nwere ike ekenye onye njikwa dị iche site na nhọrọ dị iche iche dị, dị ka ịpụ, azụ, ihu, egwu / kwụsịtụ, ntuziaka, nchapụta, ndepụta okwu., Nhọrọ egwu egwu, njikwa mkpọchi, nha windo, egwuregwu, see foto, ime ihe, nhọrọ HW / SW, na oge ugbu a.
Na mkpokọta, ngwa ahụ masịrị anyị na ndepụta ogologo nke atụmatụ ya, ọ bụ ezie na anyị hụrụ ụfọdụ ohere maka mmelite dị ka nkwado maka ọkpụkpọ azụ nke faịlụ ọdịyo, yana ọkpụkpọ kacha mma nke vidiyo vidiyo 1080p, ọ bụ ezie na obere ikpeazụ ọ bụghị nnukwu nsogbu maka ọtụtụ ndị ọrụ n'oge ahụ. N'agbanyeghị obere ọghọm ndị a, RockPlayer2 bụ otu n'ime ndị egwuregwu mgbasa ozi kacha mma dị taa, ọ nwere ike ịkwado mgbasa ozi maka egwu, nkwanye, na ịkekọrịta chọrọ nke ọma.
Budata RockPlayer2 maka gam akporo
Budata RockPlayer2 maka iOS
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » RockPlayer2 biara na njiri mara njiri mara ya yana iji kesaa WiFi otutu ma lelee vidio di na ntaneti
Foursquare na-eme mgbanwe na amụma nzuzo ya